Eyona mibongo ilungileyo yothando - Uncwadi Ne Poetry
Eyona mibongo ilungileyo yothando
Ezona zibongo zothando zilusizi zithetha ngothando olungafunekiyo, uthando olubuyisiweyo kodwa olungavunyelwanga luluntu, nothando olufunyenweyo lwaza lwalahleka kwakhona, rhoqo ngokufa. Ezinye zeembongi ezibalaseleyo zexesha lonke ziye zabona ubuze obukhuthaza eyona mibongo yothando ilusizi, kwaye amazwi abo aqhubeka nokuthuthuzela abanye abajamelene neengxaki ezifanayo. Funda imigca ukuze ufumane intuthuzelo okanye nje ukuba ushukunyiswe bubuciko babo, ukuhlala-nothando-vicariously ngamanye amagama abanye.
1. UEmily Dickinson's 'Andinakuhlala nawe'
Kulo mbongo, umbhali ubonakalisa uluvo lothando 'lusondele kakhulu, ukanti ke ukude kangaka.' Nangona abafundi benokuqikelela kuphela ngothando lukaDickinson kulo mbongo, nabani na ofumana uthando olungavumelekanga angakwazi ukuba novelwano kwaye athuthuzeleke ngamazwi akhe.
2. UEdgar Allan Poe 'uAnabelabel Lee'
Le yeyona mibongo yothando ilusizi, kwaye yenye yezona zidumileyo. Umbhali wayemthanda u-Annabel Lee ukusukela ebuntwaneni, de, 'umoya uphume efini ebusuku, ubanda ubulala uAnnabel Lee wam.' Akayeki ukucinga ngaye; akukho nto 'inokuphambanisa umphefumlo wakhe kumphefumlo ka-Annabel Lee omhle.' Kufundwe ngokunyanisekileyo ngothando olwafunyanwa lwaza lwalahleka, nangona lalinexesha lokukhula libe yinto eyomeleleyo kunayo nayiphi na into esemhlabeni, ezulwini, okanye esihogweni.
3. UPablo Neruda 'uMatilde Urrutia, Ndikushiya apha'
UMatilde Urrutia wayengumfazi kaPablo Neruda. Usweleke kwiminyaka engaphambi kokuba amenze, kwaye lo mbongo uthetha ngendlela ambona ngayo, 'Unentliziyo yomhlaba kodwa izandla zakho zivela ezulwini,' kwaye ngelishwa ushiya ngasemva. Uthi, 'Uthando lwam ngumntwana okhalayo, onqabileyo ukushiya iingalo zakho.' Wayeyazi ukuba kufuneka amxelele, kuba wayegula ngumhlaza. Umbongo uvumela umfundi ukuba abone uthando lwabo kunye neentlungu zokwahlukana.
4. URobert Frost 'Womoya kunye ne Window yeentyatyambo'
owona mhlaba upakishwe kakuhle wegadi yemifuno
Uninzi lwabafundi banokufumana uthando olungafunekiyo kwaye banokuntywila kulo mbongo ngokuqonda okupheleleyo. Umoya, okanye umntu, uziva ngathi kukho into enye (umntu) anokuyithanda. Uza amaxesha ngamaxesha ukuzama ukuphumelela. Akaze abuyekeze ngokupheleleyo. Ekugqibeleni uyanikezela kwaye aqhubeke nokufunyanwa, 'iikhilomitha ezilikhulu kude.'
5. UEmily Dickinson's 'Undishiyile'
Lo ngumbongo omfutshane, kodwa uyawudlulisa umyalezo. Isithandwa sakhe sibonise ubunzulu bemvakalelo yothando xa wayelapho kunye neentlungu ezintle xa wemkayo wamshiya ngasemva.
6. USir Walter Raleigh's 'Ndlelantle kuThando Lobuxoki'
Le yenye yeenkondlo eziphambili zothando ezilusizi kuba ayisiyonto ilusizi nje, inomsindo. Yintoni enokuba lusizi kunokungcatsha okweyisela umbhali ukuba amkele indelelo yothando xa lulonke? Le yeyona mibongo ilungileyo yomntu ohamba nokwahlukana phakathi kwabo apho baziva ngathi iimvakalelo zomthandi wabo bezingeyonyani, ukuba bebezenza ngathi babakhathalele ngalo lonke ixesha.
Iziyobisi Iziyobisi Iindidi Zindindlela Umtshato Dresses Funda Isifrentshi Malunga Ukuzalwa
Disney Theme Park Information
Izipho zoMtshato ezivela kuMyeni ukuya kuMtshakazi
Ngaba ndingamsebenzisa umbulali wokhula kwigadi yam yemifuno ekwindla?
Izimvo zesipho ebusuku
ukhathalele njani ukuwa koomama
yintoni idosi yeasprini yezinja
Izipho zomtshato zomtshato ezivela kumyeni womyeni
ukuphakama komndilili obhinqileyo oneminyaka eli-16 ubudala
zingaphi ii-servings ezikwibhotile yewayini
Izinto zasimahla zabantu abadala ngaphezulu kwe-60
indlela yokucoca i-barbecue grill
Iifeng Shui Tips